Kugadziriswa Chigaro cheWiricheya Kureba uye Kufunga
Kunze chigaro upamhi, ivo wiricheya kukwirira kwechigaro ndicho chinotevera chinonyanya kukosha sarudzo icho mushandisi achazoda kuita kana achisarudza a wiricheya. Paunenge uchiedza kuona kukwirira kwechigaro, mushandisi anofanirwa kufunga nezve kugona kwavo uye nekwavanenge vari kushandisa chigaro chakanyanya. Iyi nhanho inogona kuve inonyengera kune vamwe wiricheya vanoshandisa. Nguva dzose mawiricheya hausiyane zvakanyanya mukusarudza kwekukwirira uye kazhinji iri 19 - kusvika 20 - kukwirira. Zvehuremu uye tsika mavhiripu, iwo marefu anogona kusiyanisa kubva pazasi kusvika pa14 ″ kusvika kumusoro se21 ″.
Seat Kukwirira Matambudziko
Kana kukwirira kwechigaro kwakadzika kwazvo kunokonzeresa matambudziko senge tsoka inogara ichizvuzvurudza pasi, ichideredza kupinda kumatafura nematafura, kuendesa kwakashata, uye kusakwanisa kusvika kumashalofu akakwirira. Kana kukwirira kwechigaro kwakanyanya, zvichave zvakaoma kuzviita chinja kupinda nekubuda mu wiricheya, kuswedera padhuze netafura yekudya kunogona kunetsa uye kunhonga zvinhu kubva pasi zvichave zvakaoma zvikuru.
Zvakajairika Seat Kukwirira
"Zvakajairika zvigaro zvakakwirira" hazvinyatso kuvapo mavhiripu. Ruzhinji rweyakajairwa mavhiripu zvigaro zviri 18 ″ kusvika 19 ″ kukwirira. Uku kunoratidzika kunge kukwirira kwakaringana kuvanhu vazhinji, vanogona kuisa tsoka dzavo pasi uye kushandisa madhesiki mazhinji nemacheya akasununguka pakureba uku.
Zvinhu Zvokufunga Nezvazvo
Kureba kweiyo wiricheya chigaro chinofanirwa kunge chakafanana nechigaro chenguva zhinji chevazhinji vashandisi, asi izvi zvinhu zvinofanirwa kutariswa: Tsoka - Kana kukwirira kwechigaro kwakanyanya kuderera, zvigaro zvetsoka zvinokwenya pasi. Vagadziri vakaita kuyedza kugadzirisa nyaya iyi nekugadzira zvigaro zvetsoka kuti vagadzike tsoka kumberi izvo zvinonyanya kusimudza tsoka kumusoro kubva pasi. Makuseni - Izvi zvinowanzo wedzera 1 ″ kusvika 2 1/2 ″ pakureba kwechigaro che wiricheya saka chigaro chinofanirwa kurairwa uine izvi mupfungwa uye chinofanira kunge chakadzikira kuti chiite nzvimbo yemubato. Gara uchiyera pamushini mune yakamanikidzwa mamiriro nemushandisi akagara pairi kuti uwane chiyero chakanyatsonaka. Kureba Kwemushandisi - Chigaro chepamusoro chinodikanwa kune vashandisi vane makumbo marefu kudzivirira tsoka dzavo kuti dzisazvuva pasi. Pfupi wiricheya vashandisi vanozoda yakadzika zvigaro kukwirira kuitira kuti vagone kufamba zvakachengeteka kupinda nekubuda mu wiricheya. Kuchinja - Kukwirira kwechigaro kuchachinja mashandisiro anoita mushandisi kupinda mukati nekubuda mu wiricheya. Kana vasingakwanise kuendesa yakamira, saka iyo wiricheya kukwirira kwechigaro (kusanganisira cushion) uye kwavari kuendesa, senge chimbuzi, mubhedha kana mubhedha, inoda kuve padhuze nehurefu. Tsoka Kufambisa - Kana mushandisi asingakwanise kuendesa iyo wiricheya kushandisa maoko avo, tsoka dzavo ndiyo inotevera sarudzo yakanakisa kufamba. Muzviitiko izvi, kukwirira kwechigaro kunofanirwa kuve kwakadzikira zvakakwana kuitira kuti vakwanise kusima tsoka dzavo pasi uye vafambe fambe nyore. Kufambisa kana kazhinji kuchinyanya kukosha kwechinhu wiricheya vashandisi uye inowanzo tora kukoshesa pane kumwe kukwirira kufunga. Zvese izvi sarudzo zvinofanirwa kutariswa pakuona pekupedzisira chigaro kukwirira. Kumwe kubvumirana kunozofanirwa kuitwa asi iwe unozoita sarudzo iri nani kana iwe ukafunga zvese zviri pamusoro zvinhu.
Zvigaro Zvemacheya Zvichemo - Zvigaro Zviduku zveWiricheya
Kupinda muWheelchair - Kupinda nekubuda paWheelchair
Avhareji Kureba Wiricheya Mushandisi
Zvaungaita: Kutamisa kubva pasi kusvika kuchigaro